Izindlela Ezi-10 Zokuvikela Umuzi Wakho Ekugqekezweni
Wonke umuntu uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukugcina ikhaya liphephile. Uhlobo olulungile lokuphepha lungakuvikela wena, obathandayo kanye nempahla yakho ekugqekezweni nakwezinye izinhlobo zokugqekeza okungenzeka kube nodlame. Ngenhlanhla, kunezinto eziningi ongazenza ukukhulisa ukuphepha ...
Ikhamera Yezokuphepha Enikwe Amandla Nebhethri noma Ikhamera Yezokuphepha Enikwa Amandla Elanga?
Amakhamera ezokuphepha elanga namakhamera okuphepha anikwe amandla ngamabhethri yizinketho ezimbili zokubheka nokuqapha izakhiwo ezindaweni ezikude nezinzima zomhlaba. Yize amadivayisi aguquke kakhulu atholakala kuzo zombili izigaba, umehluko usekutheni bazisingatha kanjani izidingo zabo zamandla. W ...
Isingeniso sezimpawu nezinzuzo zesilinganiso sokushisa nokuklanywa kobuso okuhlanganisiwe komshini
Ukuze kucindezelwe ukusabalala kwegciwane, isilinganiso sokushisa mathupha sisetshenziswa ezindaweni eziningi, ezinokubi kokusebenza okuphansi nobungozi obukhulu. Isilinganiso sokushisa kwesizukulwane sesibili se-Aopvision nokuqashelwa kobuso umshini wokukodwa osebenzisa ukucacisa okuphezulu kwe-infrared modul ...